Xasan oo jawaab culus ka bixiyey qoraalkii Farmaajo | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xasan oo jawaab culus ka bixiyey qoraalkii Farmaajo
Muqdisho (Dalkaan.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana mid ah Midowga Musharrixiinta ayaa ka hadlay qoraalkii kasoo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Manchester United oo ogolaatay Anthony Martial inuu heshiis la gaaro Sevilla.
Manchester United iyo Sevilla ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis amaah ah ka kala gaadheen Anthony Martial . Xidigii hore ee Monaco ayaa ku...
Guddiga doorashada Somaliland oo shaaciyey jadwalka 5 kursi – Yaa ku...
5 jirka 5-ta cishe ku jiray God dhirirkiisu yahay 32 Mitir...
War Rasmi Ah: Arsenal iyo Man City oo ku heshiiyey qiimaha...
DOES JOINT ENTERPRISE STILL EXIST? ”MISCARRIAGES OF JUSTICE”
Daawo: Bashiir Goobe oo shaaciyey xogta dhulka la sheegay inuu boobayo...